Gujiitti Obboleessi Angawa Bulchaa Godinaa ‘Miseensota WBO’n Ajjeefamuu Poolisiin beeksise
Onkoloolessa 04, 2019
Obbo Dullacha Turcee obboleessi bulchaa godina gujii bahaa Roobii galagala qaamolee hidhattootaa maqaa WBO’n sochao’aniin Anaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan Qajeelcha Poolisii Gujii Bahaa koomander Gosaayeen VOA’f haala ajjeechaa raawwatamuunsaa himame yoo ibsan ‘hidhattoonni kun obbo Dullacha turcee (Obboleessa Angafaa obbo Roobaa Turcee) manaa fuudhanii ajjeesanii deemuu’ Sagalee Ameerikaaf himan.
‘Halkan dhokatanii dhufanii fuudhanii deemanii gara bosoanaa erga geessan booda, gara jabeenyaani tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhatanii kan deemani’ Koomaander Gosaayee; Ajajaa Qajeelcha Poolisii Gujii Bahaa
Koomaander Gosaayeen hidhattoonni kun maaliif akka ajjeecha kana raawwataniif waanti beekamu jiraa gaaffii jedhu gaafatamnii yoo dubbatan, ‘hidhattoonni Gujii keessa socho’an kun kanaan duras ajjeechaa fi saamicharratti bobba’anii turan ammas sanuma raawwatan jechaan deebisan.’ Humni nageenya mootummaas eenyummaa warra ajjeechaa kana raawwatee qulqulleeffachaa akka jirus koomaander Gosaayeen dabalanii himanii jiru.
Warra ajjeechaa kana raawwwatan jedhaman keessaa ka to’annoo jela oolchitan jiruu jechaan gaaffii gaafatamaniifis, ‘ammaaf yakkicha qorachaa jirraa’ jechuun waa’ee warra toa’annoo jela oolfamee ibsuurraa of qusataniiru. Jiraattonni naannoo waan ajjeechaa kana yaada isaanii VOA’f kennan garuu ajjeefamuun Obbo Dullacha Turcee, ajjeechaa jimaata darbe torban harraa humnootni naga kabachiiftota mootummaa ‘namoota nagaa’ sadii hidhanii, hidhaa baasanii ajjeesan jedhameen wal qabachuu hin hafuu’ shakkii jedhu qabu. Jiraataan Gooroo doolaa ganda mucoo eenyummaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaaf, obbo Dullachi naannoo keessatti nama kabajamaa akka ta’an kaasanii hidhattoonni isaan ajjeesan garuu ajjeechaa gujiitti qaama naga kabachiistota mootummaan ta’aa jiruu Obboleessa isaanii Obbo Roobaa Turceetu ajajaa jiraa jechaan kana raawwatan jedhu.
Waa’ee ajjeefamuu obboleessa angawa mootummaa godina gujii bahaa kana obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaan ajajaa loltoota waraana bilisummaa oromoo ka naannoo Gujii bahaa gaafatamanii jiru. Obbo Waaqumsaa deebii kennan keessatti ‘miseensonni “WBO” saba falmuuf irraan miidhaan hin geessisan, darbees “siyaasa rakasaa” akkasiis hin raawwatanis’ jechuun dubbatan.
Ajajaan Qajeelcha poolisii gujii bahaa amma haalli nageenya naannoo walii galaan fooyya’aa ta’uu himanii garuu gujii bahaa aanaalee Gooroo Doolaa, Sabbaa Booruu fi Gumii eldalloo keessatti ammas rakkoon nageenyaa jiraachuu amaananii jiru.